कृषकको श्रमलाई सम्मान गरौं « Sansar News -->
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार २१:२५
भारतमा सरकारले किसानलाई पहिले भुक्तानी गरेपछि मात्र किसानले उखु काटेर बिक्री गर्ने गर्छन् । सरकारको यस्तो नीतिले त्यहाँका किसान अहिले खुसीले गदगद छन् । उत्तर प्रदेशमा किसानको उखुको भाउ सरकारले बढायो । किसानको बाली समयमा किन्ने, भुक्तानी पनि दिने राम्रो नीति ल्याएको छ । तर हाम्रो देशमा एक त कृषकलाई उखु खेती गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसमा पनि मूल्य बढाऊ, समयमा मूल्य पाएन, उखु सुक्यो जस्ता विभिन्न कुराको समस्याले जहिले पनि चिनी कारखाना र किसानबीच विवादै हुन्छ । किसान र मालिक बीच मुद्दा सम्म चल्ने गरेका छन् ।
हुन त बन्दाबन्दीकाबीच देशभरीकै किसानको उत्पादनले बजार नपाएको अवस्था छ । बाहिरबाट आनउने तरकारी उपभोक्तको घर–घरमा पुग्ने र नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खाल्डो खनेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर यतिबेला मैले आफ्नो लेखमा उल्लेख गर्ने खोजेको कुरा अर्घाखाँची जिल्लाको हो । बन्दाबन्दीको बेला र किसानले आफ्ना उत्पादन अन्य सहरमा लैजान नसकेको अवस्थामा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र आयातित उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने निति अबलम्बन गर्न जरुरी छ । जिल्लास्थित कृषि ब्यापारी, कृषि उपज धेरै खपत हुने होटल, सरकारी कार्यालयहरु, उपभोक्ता समिती तथा सहकारीहरुसँग छलफल गरी स्थानिय उत्पादनको बजारीकरण तथा उपभोग गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्न सबैले अनुरोध गरौं । यो बन्दाबन्दीलाई विवेकपूर्ण ढंगले प्रयोग गरौं । ज्यादै नअतालिऔं । तर, सचेत, सजग र संयमित भएर कोरोना महामारीको सामना गरौं । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सम्झिऔं, होसियारीपूर्वक व्यवहार पनि चलाउदै जाऔं भन्ने अनुरोध गर्दछु ।
एशियाको सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार दिल्ली आजादपुर मंडीमा १५ जना व्यापारीलाई कोरोना पोजेटिभ थियो । भारतीय प्रशासनले कोरोना भएका ब्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर उपचार गर्यो । तर, किसानले मेहनत गरेका सागसब्जी फलफूलहरू बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएन । बजार बन्द गरेन । प्रशासन लगाएर सार्वजनिक स्थलमा तरकारी नष्ट गर्ने काम पनि गरेन ।
कपिलबस्तु हुँदै झन्डै आधादर्जन पुलिस चौकीबाट सोधपुछै नगरी अनि चेकजाँचै नगरी सब्जीवाला गाडी जिल्ला पुगेको छ । यो कसको कमजोरी हो ? यसमा किन कसैको ध्यान गएन ? त्यहाँका स्थानीय किसानले कडा मेहनतले उत्पादन गरेका सागसब्जी जिल्ला प्रशासनले नै सार्वजनिकस्थलमा नष्ट गर्ने र बाहिरबाट भित्रिएको तरकारीलाई स्वागत गर्ने अधिकार कसले दियो ? यो अन्यायपूर्ण कार्यप्रति घोर भत्र्सना गर्दै पीडितका लागि क्षतिपूर्ति दिइयोस् भन्ने माग गर्दछु ।
किसानहरुलाई भोट वैकका रुपमा विकसित गर्ने र कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान नदिने राजनीतिक बर्ग, प्रशासक बर्गहरुका कारणलेनै मुलुक कृषिप्रधान देशबाट किसान प्रधान देशतर्फ उन्मूख भएका्े हो भन्दा नै अत्यूक्ति होला । त्यसैले पनि सरकारमा जानेहरुले कृषि पेशामा संलग्न हुनेहरुका लागि पेशाको ग्यारेण्टी सहितको योजनाहरु ल्याउन सके मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डको विकास मात्र होइन खाद्य संकटबाट पनि मुलुकलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बेलैमा ध्यान दिइयोस् ।
कृषि उन्नतिका लागि हामीले केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार पनि निर्माण गरिसकेका छौं । सबैतिर कृषिउपज र कृषि सामग्री ढुवानी गर्न सडकहरू पुगिसकेका छन् । अब जुम्ला, डोल्पा, गुल्मी अर्घाखाँची र मुस्ताङका स्याउ बोटमै सडेर जाने अवस्था छैन । दुर्गमभन्दा दुर्गम गाउँका किसानले उत्पादन गर्ने फर्र्सी, काँक्रा, घिरौंला, गोलभेंडा, सागसब्जी र फलफूल बजार र्पुयाउनलाई समस्या छैन ।
उद्योग, कलकारखाना वा गाडीमा आगो लाग्यो भने इन्सुरेन्सले खर्च व्यहोर्ने गर्छ तर किसानको बालीनालीमा क्षति भएमा पनि किसानलाई सरल र सुलभरूपमा कृषि बीमाको अवधारणा ल्याउन नसकिएको अवस्था छ । किसानको जमिन किसानले मात्रै बेच्ने र त्यो जमिनमा प्लटिङ गर्न नदिई कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित मात्र उद्योग तथा कलकारखाना खोल्ने, कृषकले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई बिक्रिवितरण गर्न उचित बजारको पनि व्यवस्था मिलाई सस्तो र सुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराउने बैंक र बीमाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढाउनको लागि कृषि बजारलाई कसरी आधुनिक बजारमा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि ध्यान दिनु अति नै आवश्यक देखिन्छ । यी यावत कुराको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने प्रदेश नम्बर ५ ले अन्य प्रदेशलाई पनि प्रेरणा दिन सक्ने उदाहरण बन्न सक्छ ।